Ndi mmadu | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Akwụkwọ: The humanities
Ogologo oge ole ka nkume ahụ na-adịru?
Ogologo oge ole ka nkume ahụ na-adịru? The Stone Age in Archaeology The Stone Age Fishing Hook Ihe kpọmkwem oge nke oge a ejighị n'aka, controversial na ịdị iche site na mpaghara. Otú ọ dị, anyị nwere ike ikwu banyere Nkume Age ...
Biko dee ọtụtụ nkà mmụta sayensị dị ka o kwere mee.
biko kpoo sayensi ndi oka iwu mara ihe omuma di na iwu. Mana e kewara ya na akụkụ dị iche iche, dịka sayensị zuru oke ...
ọdịdị nke ederede n'ụwa
ọdịdị nke ide ihe n'elu ala Ihe odide mbụ nke sitere na ụwa bụ onye Sumeria. O mere banyere 5 ọtụtụ puku afọ gara aga. A na-akpọ edemede ha cuneiform n'ụdị ọhụrụ ya. Ha dere na mbadamba ụrọ ...
kedu ihe nchapu
kedu ihe bụ onye na-ekpochapu ihe igwe na-ekpo ọkụ, nke a na-eme maka ịtọ ala (nkedo n'elu) ka ọ na-egwu ala, njem ma na-atụfu ha n'ime ala na-eme ka e nwee okpukpu. :)) Scraper, scraper (English scraper, si scrape scrape ...
Ị nwere ike ịza azịza?
Ị nwere ike ịza azịza? John Lewis bu ụzọ kọwaa Ramaukk na 1934 site na iji eriri elu nke dị na India, nke dị ihe dịka 12 nde afọ. Mgbe e mesịrị, a hụrụ ozu ya na Eastern ...
kedu ihe bụ ngwaahịa
Kedu ihe bara uru bụ ihe ịzụrụ na ire. Ndị mmadụ na-adaba na ụdị a. ihe maka ere. Ihe nchoputa # 769; p ihe obula nke no na ihe ndi ozo. 1, ...
Kedu ka akara ajụjụ ahụ si apụta?
Kedu ka akara ajụjụ ahụ si apụta? Akara edemede bụ ihe ọhụrụ na-adịbeghị anya. Mba ndị dị n'Ebe Ọdịda Anyanwụ na n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ Ụwa enweghị akara akara ọ bụla, ọbụnakwa ndị Asiria na ndị Babilọn tinyere oghere naanị n'ikpeazụ ...
Kedu ọrụ ebere?
Kedu ọrụ ebere? Ozhegov's Dictionary of Discrepancy: Iji nye mmadụ ebe obibi na nri P. nwa mgbei. Dictionary Explanatory nke Russian Language PRISM, m na-atụgharị uche, oku na prizz; mmụọ ikwiikwii onye (ihe) (oge a.).
Nchịkọta Bekee biko sụgharịa idiom / okwu. MGBE OBI. Nsụgharị Russian
English.yaz Biko nye aka tugharia idioms / okwu. EGO dị mkpa. ntụgharị gaa na Russian Score ihe mgbaru ọsọ - akara ihe mgbaru ọsọ onwe gị nwoke na-arịa ọrịa na-ada ada - ahụike mmadụ na-aka njọ ịmalite ịgba bọọlụ - jiri ...
ihe okwu a bu "obi nkoropu"? biko nyenu ihe nlere di egwu
ihe okwu a bu "obi nkoropu"? biko nye ihe atụ nke omume enweghị isi. Nke a bụ mgbe enweghị ụzọ ọ bụla ga-esi dị njọ Mana aghaghi ịchọta ya. Ha wee sị na ọ bụ ya, ma ọ bụ mee ya ...
Biko gwa m nkọwa nke usoro isiokwu nke ihe ọmụma na ihe ọmụma ...
Biko gwa m na nkọwa nke okwu banyere ihe ọmụma na ihe ọmụma ... Anaghị m echetakwa oge akpọrọ ụwa, mana isiokwu ahụ maara, na ihe a maara nke ọma (ihe dị ka nke ahụ :))))) Isiokwu ...
Marxism-Leninism / Kọwaa nkenke na nke doro anya Gịnị ka ọ bụ? Kedu ihe bụ isi nke echiche a?
Marxism-Leninism / Kọwaa n'ụzọ dị nkenke na kedu nke ọ bụ? Gịnị bụ echiche nke echiche a? Marxism-Leninism bụ sayensị nke iwu nke mmepe nke okike na ọha mmadụ, sayensị nke mgbanwe na mmeri nke socialism na…
kedu ihe bụ epic
ihe bụ epos Anpos bụ ụdị akwụkwọ edere na akụkọ banyere ihe mere n'oge gara aga, mgbe mgbe n'ụdị ncheta nke ụdị ihe emezuru. Ruo narị afọ nke 18, nke a…
Ụdị mmeghachi ionic ionic.
Ụdị mmeghachi ionic ionic. enweghị ngosipụta mmeghachi ion Ion Na mmeghachi omume nke kemịl na ngwọta electrolyte (acids, bases na salts) na-ejikọta ions. Ihe ngwọta ikpeazụ nwere ike ịnọgide na-edozi (ngwaahịa ndị a na-edozi ya na mmiri) ...
Nyere biko ... choro ọla kọpa ..
Biko nyere aka ... ị chọrọ nza nke ọla kọpa .. Njupụta: 8,96 g / cm3 ọla kọpa njupụta - 8,93 * 103kg / m3; Ike ọla kọpa a kapịrị ọnụ bụ 8,93 g / cm: 3; Igwe kọpa a kapịrị ọnụ na 20oC bụ 0,094 cal / hail; Ebe a na-agbaze ọla kọpa ...
chọrọ enyemaka. Biko dee aha isi nke obodo.
chọrọ enyemaka. Biko gosipụta ebumnuche ndị bụ isi nke ọha na eze, ebumnuche kachasị (na naanị) nke ndị nkịtị - ntinye ụmụ amaala n’onwe ha na gọọmentị yana iwulite ụkpụrụ ọha. ihe ọ bụla ọzọ na-aga site ebe a. Echiche nke…
Kedu ihe bụ data gbasara ọnụ ọgụgụ 1926 na ịntanetị site na obodo?
Kedu ihe bụ data gbasara ọnụ ọgụgụ 1926 na ịntanetị site na obodo? 17 Disemba 1926 ka a na-edekọ ọnụ ọgụgụ mbụ nke United States dum nke USSR, nke kpuchiri ọnụ ọgụgụ dum nke mba ahụ. Nke usoro nyocha ahụ duziri. Ezuru ndi mmadu ka ha buru n'uche ...
Gịnị bụ "nkwubi okwu"
Gini bu “ntinye?” Ntinye bu usoro iche echiche, ebe ana - ekwuputa mmechi, ma obu ihe si na ya puta site na otutu ma obu ihe ndi ozo, akporo ulo. A na-ekekarị ntinye n'ime ihe gbasara iche (lee: Mbepụ) ...
Nyere m aka ịhụ ọkachamara ARGENTINA, GUINEA, LIVIA, MALAYSIA, USA, FINLAND, CHINEKE Biko nyere m aka
Nyere m aka ịhụ ọkachamara nke ARGENTINA, GUINEA, LIVIA, MALAYSIA, USA, FINLAND, CHILE, biko nyere m aka. Ụdị ụdị ọrụ a ka anyị na-ekwu? Ọ bụrụ na ọ bụ akụ na ụba, mgbe ahụ anyị na-aga ebe a, na-agụ banyere mmepụta uranium, yana anụ na ọka wit, na ígwè ọrụ injinia ...
onye na kedu ka esi kwatuo Bismarck agha?
onye na kedu ebe agha Bismarck? lee anya ebe a, ihe zuru oke, site na nkeji: a na-egbochi njikọ ahụ site na mkpebi nke nchịkwa ngo .. Bismarck bụ ọgụ nke ndị agha mmiri German, otu n'ime ndị ama ama ...
Ajuju 14 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 0,410.